Inkinga Yefayela le-2GB PST. Inkinga Yefayela Elikhulu le-PST.
Ikhaya Imikhiqizo DataNumen Outlook Repair Inkinga yefayela enkulu ye-PST (usayizi wefayela le-PST ufinyelela noma weqe umkhawulo ongu-2GB).
Imininingwane enemininingwane mayelana ne-Oversized PST File Problem
Iyini inkinga yefayela le-Oversized PST?
Izinguqulo zeMicrosoft Outlook 2002 nezangaphambili zilinganisela usayizi wefayela le-Personal Folders (PST) ku-2GB. Noma nini lapho ifayili le-PST lifinyelela noma leqa lowo mkhawulo, ngeke usakwazi ukulivula noma ukulilayisha, noma ungeke ukwazi ukwengeza idatha entsha kulo. Lokhu kubizwa ngenkinga yefayela enkulu ye-PST.
I-Outlook ayinayo indlela eyakhelwe ngaphakathi yokutakula ifayela le-PST elingaphezulu elingafinyeleleki. Kodwa-ke, iMicrosoft inikeza ithuluzi langaphandle i-pst2gb njengesikhashana, esingabuyisela ifayela esimweni esisebenzisekayo. Kepha kwezinye izimo, leli thuluzi lizohluleka ekubuyiseni amafayela amakhulu. Futhi noma inqubo yokubuyisela iphumelela, enye idatha izoncishiswa futhi lost unomphela.
IMicrosoft iphinde yakhipha amaphakethe wezinsizakalo eziningana ukuze kuthi lapho ifayili le-PST lifika kumkhawulo we-2GB, i-Outlook ayikwazi ukwengeza noma iyiphi idatha entsha kuyo. Le ndlela, ngokwezinga elithile, ingavimbela ifayili le-PST ekubeni lisetshenziswe ngokweqile. Kepha uma umkhawulo usufinyelelwe, awusoze wenza noma yimiphi imisebenzi, efana nokuthumela / ukwamukela ama-imeyili, wenze amanothi, usethe ama-aphoyintimenti, njll., Ngaphandle kokuthi ususe inqwaba yedatha kufayela le-PST futhi icwecwe ngemuva kwalokho ukunciphisa usayizi wayo. Lokhu kuphazamisa kakhulu lapho idatha ye-Outlook ikhula iba nkulu futhi ibe nkulu.
Kusukela iMicrosoft Outlook 2003, kusetshenziswa ifomethi entsha yefayela le-PST, elisekela i-Unicode futhi elingenawo umkhawulo wosayizi ongu-2GB. Ngakho-ke, uma usebenzisa iMicrosoft Outlook 2003 noma 2007, nefayela le-PST lenziwa ngefomethi entsha ye-Unicode, lapho-ke awudingi ukukhathazeka ngenkinga yokweqisa.
1. Uma uzama ukulayisha noma ukufinyelela ifayela le-Outlook PST elikhulu, uzobona imilayezo yephutha, efana nale:
Kutholwe amaphutha kufayela elithi xxxx.pst. Yeka zonke izinhlelo zokusebenza ezinikwe amandla ngeposi, bese usebenzisa Ithuluzi Lokulungisa Ibhokisi Lemilayezo Engenayo.
lapho 'i-xxxx.pst' igama lefayela le-Outlook PST elizolayishwa noma lifinyelelwe.
2. Uma uzama ukwengeza imilayezo emisha noma izinto kufayela le-PST, futhi ngenkathi kwenziwa inqubo yokwengeza, ifayela le-PST lifinyelela noma lihamba ngaphezu kwe-2GB, uzothola i-Outlook yenqaba ukwamukela noma iyiphi idatha entsha ngaphandle kwezikhalazo, noma uzobona imilayezo yephutha, efana:
Ifayela alikwazanga ukungezwa kufolda. Isenzo asikwazanga ukuqedelwa.
Iphutha le-Task 'Microsoft Exchange Server - Receiving' (0x8004060C): 'Iphutha elingaziwa 0x8004060C'
Ifayela le-xxxx.pst selifinyelele usayizi walo omkhulu. Ukwehlisa inani ledatha kuleli fayela, khetha ezinye izinto ongasazidingi, bese uzisusa unomphela (shift + del).
Njengoba kushiwo ngenhla, iMicrosoft ayinayo indlela engaxazulula inkinga yefayela le-PST enkulu ngokwanelisayo. Isixazululo esihle kakhulu umkhiqizo wethu DataNumen Outlook Repair. Ingalulama ifayela le-PST elikhulu ngaphandle kokulahleka kwedatha. Ukwenza lokhu, kunezindlela ezimbili ezihlukile:
Uma une-Outlook 2003 noma izinhlobo eziphakeme ezifakiwe kwikhompyutha yakho, lapho-ke ungakwazi guqula ifayela le-PST elikhulu kakhulu libe yifomethi entsha ye-Outlook 2003 unicode, engenawo umkhawulo we-2GB. Le yindlela ekhethwayo.
Uma ungenayo i-Outlook 2003 noma izinhlobo eziphakeme, lapho-ke unga hlukanisa ifayela elikhulu le-PST libe ngamafayela amancane ambalwa. Ifayela ngalinye liqukethe ingxenye yedatha esefayilini le-PST yoqobo, kepha lingaphansi kuka-2GB futhi lizimele kwamanye ukuze ukwazi ukulifinyelela ngokwehlukana ne-Outlook 2002 noma izinhlobo eziphansi ngaphandle kwezinkinga. Le ndlela iphazamisa kancane njengoba udinga ukuphatha amafayela amaningi we-PST ngemuva kokuhlukaniswa kokusebenza.